Isilayidi sikaPixel sikaGoogle sisemthethweni: amanqaku ale thebhulethi intsha | I-Androidsis
Namhlanje ibe luhambo olunomdla kuGoogle. Ukulandela umboniso wakutshanje we Google Pixel 3, Kunye nala maqela mabini kuza necwecwe elitsha, i Pixel Slate, eya kujolisa ekukhuphisaneni neApple iPads kunye neMicrosoft Surface evela kwinkampani yeBill Gates.
Eli qela litsha iza nesiseko sokukwazi ukunamathela kwikhibhodi kunye nokudibanisa i-Chrome OS, Kodwa ayisiyiyo yonke loo nto. I-G enkulu isebenze kakuhle, kungoko kunokwenzeka ukuba sijongane nempumelelo entsha kwinkampani yaseMelika. Konke oku kuya kuxhomekeka kuphuhliso lwayo kunye nokwamkelwa kwintengiso. Sikuxelela iinkcukacha zeli cwecwe litsha!
Isilayiti sikaGoogle Pixel iza neChannel OS, Njengeencwadana ezininzi zeencwadi zePixel. Oku kuphawula isizukulwana esitsha kuluhlu lwamacwecwe enkampani. Khumbula ukuba iPixel C, eyaphehlelelwa kudala, yeza ne-Android njengenkqubo yokusebenza, ke IPixel Slate lukhetho olunomdla ukuthathela ingqalelo xa uthenga umbulelo kule OS inomdla.
Ngexesha Chrome OS ayinakuqhuba ii -apps ze-Android kunye nemidlalo kwixa elidlulileyo, okwethutyana injalo, kunjalo kukhokelela kwinkqubo yokusebenza eyi-hybride epheleleyo. Nangona ujongano lwe-Chrome OS lungakhange lubonakalise ukuba lulungiselelwe izikrini zokuchukumisa njenge-Android, uGoogle uthembisa ukuphuculwa kweli candelo, esiza kuvavanya lona kungekudala.
1 Isilayidi sikaGoogle sePixel: uyilo oluncinci nolusebenze kakuhle
Isilayidi sikaGoogle sePixel: uyilo oluncinci nolusebenze kakuhle
UGoogle uzamile ukusizisela icwecwe elipholishwe kwaye lenziwe kakuhle. IPixel Slate sisiphumo sale nto yenziwe yinkampani, Kwaye nenkwenkwe iyabonisa, njengoko le thebhulethi ilumkileyo ilungile esandleni. Konke oku kwehla kwinto enye: iPixel Slate ineqondo eliphezulu lokuphatheka. Nangona kunjalo, ii-bezels ezikule cwecwe azikho mxinwa njengoko besinethemba, nangona bebaninzi ngaphezu kwabo babizwa ngokuba yiPixel C. Oku kuyabulelwa.
Kwelinye icala, le mveliso intsha iza neenkcukacha ezinomdla, ezinje nge Isikrini esingu-12.3-intshi siza nayo, Iyakwazi ukubonelela ngesisombululo seepikseli ezingama-3.000 x 2.000 kunye noxinano lwe-293 ppi. Esi sikrini sihambelana neStylus, eya kuthengiswa ngokwahlukeneyo, kunye nebhodi yezitshixo. Ukongeza, ngokwenkqubo yayo, iza nesizukulwane se-3 i-Intel Celeron, i-Intel Core M5, i-Intel Core i7 okanye i4 njengentliziyo, ehamba ne-8, 16 okanye i-32 GB ye-RAM kunye nama-64, 128, 256 okanye i-XNUMX GB yendawo yokugcina yangaphakathi enokwandiswa nge-MicroSD.
Ngokubhekisele kwicandelo lokufota, IPixel Slate inekhamera yangemva nangaphambili enesisombululo se-8 MP, Ngemisebenzi efana naleyo yePixel 3 entsha, enje nge-HDR +. Isivamvo esingasemva sinama f / 1.9 ukuvula kunye nokurekhodwa kwevidiyo eyi-1.080p, ngelixa umphambili unendawo efanayo. Ngaphandle koko, inomfundi weminwe odityanisiweyo kwisakhelo sescreen.
Ngokubhekisele kwezinye iinkcukacha, ilinganisa i-202 x 290 x 7mm, inobunzima obungama-721 gram kunye Inebhetri engama-48 WHr, ekwaziyo ukubonelela ngokuzimela ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-12 zokusetyenziswa. Ukongeza, ibandakanya i-Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, iBluetooth 4.2, ukuthinta izijekulo, isithethi esiphambili esiphambili kunye namazibuko amabini e-USB Type-C 3.0
Okwangoku, iGoogle Slate yePixel sele ithengiwe eMelika. Ixabiso layo lokuqala lifumaneka kwiidola ezingama-599 (~ 521 euros) kwaye inyuka yaya kwiidola eziyi-1.599 (~ 1.390 euros), Kuxhomekeka kukwahluka. Ewe kunjalo, kufuneka sikhumbule ukuba eli lixabiso lecwecwe lilodwa, kuba ikhibhodi yePixel Slate, eyikhibhodi ebonakalayo, ithengiswa yodwa malunga ne- $ 199 (~ 173 euros) kunye nePenbookbook Pen, eyi Ipensile, malunga ne-99 yeedola (~ i-euro ezingama-86).
Isilayidi sikaGoogle sePixel kunye ne-Intel Celeron SoC ene-4 GB kunye ne-32 GB$ 599 (~ 521 euro)
Isilayidi sikaGoogle sePixel kunye ne-Intel Celeron SoC ene-8 GB kunye ne-64 GBIidola ezingama-699 (~ 607 euro).
Isilayidi sikaGoogle sePixel kunye ne-Intel Core M3 SoC ene-8 GB kunye ne-64 GBIidola ezingama-799 (~ 694 euro).
Isilayidi sikaGoogle sePixel kunye ne-Intel Core i5 SoC ene-8 GB kunye ne-128 GBIidola ezingama-999 (~ 868 euro).
Isilayidi sikaGoogle sePixel kunye ne-Intel Core i7 SoC ene-16 GB kunye ne-256 GBIidola ezingama-1.599 (~ 1.390 euro).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Isilayidi sikaGoogle Pixel ngoku sisemthethweni: sikuxelela yonke into!
Iifoto zikaGoogle eziPhila kwiiAlbham ziya kulayisha ngokuzenzekelayo ezona foto zakho zibalaseleyo kwiHub yasekhaya